မရောက်ဖြစ်ဘူး..တခြားမဟုတ်ပါဘူး..ပြည်တွင်းကထုတ်တဲ့..မြန်မာတိုင်းမ်စ်တို့..weekly 11 တို့..
တွေ..ပုံလေးတွေကြည့်ပီး..သြော်..ဘယ်ဆိုးလို့လဲဟ..ဆိုပီး နဲနဲတော့ ရင်ကြပ်သက်သာ
ဆောင်ရွက်လို့ရတော့မယ်တဲ့....online certification ဆိုလား...
သူငယ်ချင်းတယောက်ဆို..သူကမော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကအောင်ပီး..သူတို့ကျောင်းက.အမှတ်စာရင်းထုတ်မပေးလို့ဆိုလား..သွားမယူနိုင်တော့လို့ဆိုလား..ခပ်တည်တည်နဲ့..A တွေ A+ တွေချည်းထပ်ပစ်
အင်း..အဲဒီ ၀န်ဆောင်မူအပြင်..တခြားအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မူ ၅ မျိူးကိုလုပ်ဆောင်ဖို့ လိုင်စင်ရတဲ့.
ITCS ကုပ္မဏီက..ဆရာခင်မောင်ညို( ဘောဂဗေဒ) ဦးဆောင်တာဖြစ်ပီး..လက်ရှိ ခောတ်လူငယ် website ရဲ့နာယကအဖြစ်တာဝန်ယူထားတယ်လို့..ဖတ်လိုက်ရတော့..သြော်ဒီလိုလားလို့သဘောပေါက်သွား
ဒီနေ့မှဖတ်မိလို့ ဒီပို့စ်လေးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရပါတယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က စာရွက်စာတမ်းအကြောင်းဖတ်မိလို့ ကိုယ်တွေ့လေးတခုပါ။ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မပြောဖြစ်ဘူး. အခုတော့ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်မိရင်းတိုက်ဆိုင်လို့ ရေးမိတာပါ.. အခု ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က ဂုဏ်ထူးတန်းသမားတွေကို ဂရိတ်ဒင် တခုပဲထုတ်ပေးပြီး အမှတ်စာရင်းရယ် ထရန်စခစ်ရယ် မပေးပါဘူးတဲ့။ ကျွန်မမောင်လေး မာစတာတန်း ကျောင်းလျှောက်ဖို့အတွက် တောင်းတာ ကျောင်းသားရေးရာက ပေးလို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ်။ ဂရိတ်ဒင်ရယ် ထရန်စခစ်ရယ်ကို မာစတာတန်းအောင်ပြီး PHD ၀င်ခွင့်ရတဲ့သူကိုပဲပေးပါတယ်တဲ့။ တခြားမှာ ကျောင်းလျှောက်ဖို့ကလည်း အဲဒီ့စာရွက်စာတမ်းက လိုတယ်ဆိုတော့ အခုအတိုင်းဆို လျှောက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာပေါ့။ လူငယ်တွေအတွက် ပညာရေးကို ပြည်ပထွက်ပြီးမသင်စေချင်ဘူးနဲ့တူပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မကေသွယ်ရဲ့ပို့စ်ဖတ်ရတာ နည်းလမ်းတော့ ရလာမှာပါ။း)